Maamulka Juba iyo Alshabaab ku dagaalamay Jubada Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada maamulka KMG ah ee Juba oo garab ka helaya ciidamada Amisom ayaa Alshabaab kula dagaallamay deegano kala duwan oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose.
Mid ka mid ah dagaallada ayaa ka dhacay deegaanka deegaanka Turkhato oo qiyaastii 30 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo, waxaana dagaalladani ay ahaayeen kuwo xooggan oo ay labada dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Maxamed Cabdi Raamsade oo ka mid ahaa saraakiishii hogaamineeysay dagaalladii ka dhacay deegaanka Turkhato ayaa sheegay in dagaallo shalay ilaa saaka siyaabo kala duwan uga dhacay deegaankaasi ay ka gaareen guulo.
“Dagaalkii shalay waxaan kula wareegnay deegaanka Turkhato oo Al-shabaab saldhig u ahayd, ciidamaduna dib ayay uga soo gurteen, saakana xiisad ayaa ka taagan deegaanka,” ayuu yiri Raamsade oo warbaahinta la hadlay.
Dhanka kale, sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobalka Jubbadda Hoose, waxaa shalay dagaal culus uu maanta ka dhacay duleedka degmada Afmadoow ee Gobalkaasi.
Dagaalkaan, ayaa wuxuu yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada Kenya ay ku leeyihiin duleedka Afmadoow, halkaasi oo ka dhacay dagaalka xoogiisa, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ku sugan Degmada Afmadoow.
Labada dhinac ee dagaalamay ayaa isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud, iyadoo ciidamada Kenyatiga ay ridayeen hub culus oo dhawaqiisa guud ahaan laga maqlaye Magaalada Afmadoow iyo tuulooyinka ku dhaw-dhaw.
Ugu yaraan 7-ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ayeey dadka deegaanka xaqiijiyeen inay geeriyoodeen, waxaana dagaalka qeyb ka ahaa ciidamada Maamulka KMG ee Jubba ee ku sugan Magaalada Afmadoow.
Al-Shabaab ayaa baraha Internet-ka ay wararka ku baahiyeen, waxa ay ku qoreen in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhawaad 11-Askari oo Kenyati ah, ayna ku gubeen labo gaari oo ciidamada Kenyatiga ay wateen.